सैनिक सवार विमान उडेको के’हिबेरमै दु’र्घटना , सबै यात्रु’को मृ’त्यु भएको हुन सक्ने ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /बिस्व समाचार/सैनिक सवार विमान उडेको के’हिबेरमै दु’र्घटना , सबै यात्रु’को मृ’त्यु भएको हुन सक्ने !
नाइजेरियाको राजधानी अबुजा’को विमानस्थलमा आइतबार सैनिक विमा’न दु’र्घटना भएको छ । उक्त विमान’मा सवार सबै यात्रु जी’वित रहनसक्ने आशा निकै कम रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचारहरूमा बताइएको छ ।
वि’मान दु’र्घटना’को पुष्टि गर्दै उ’ड्ड’यन मन्त्री हदी सिरिकाले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमार्फत दुर्घ’टनाको पु’ष्टि गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सैनिक विमान किङ एअर ३५० अबुजाबाट मिएनाका लागि छुट्दासाथ अबुजा वि’मानस्थल नजिकै दु’र्घटना’ग्र’स्त भएको छ ।
सिरिकाले भन्नुभयो, “दु’र्घ’टना भ’या’न’क ब’ताइए’को छ । हामी शान्त रही सेनाको अनुसन्धान’को नतिजा’को लागि पर्खनु पर्छ साथै यस घडीमा हामी सबैले पी’डितहरूको लागि प्रा’र्थना गरौँ ।”
इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले को’रोनाभाइ_रस विरुद्ध’को फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
खोप लिएका व्यक्तिमा गरिएको अनुसन्धानबाट खोपले झण्डै ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारी प्रमाणित भएको मन्त्रालयको भनाई छ । साथै, फाइजरको खोप ग’म्भीर बि’रामी व्यक्तिका लागि ९९.२ प्रतिशत र मृ’त्युदर रोक्न ९८.९ प्रतिशत सफल रहेको पाइएको छ ।